Self-enamathelayo Fibreglass enemingxuma / Fibreglass oluyinethi for GRC kunye EPS model - China QuanJiang izinto ezintsha
Self-enamathelayo fiberglass enemingxuma olukiweyo yi C-iglasi fiberglass vulu, wawutyabeka kunye zokwaleka kwealkali ukumelana kunye self-enamathelayo glue. It yenzelwe indlela elukhuni, umzekelo GRC nophahla kunye nomzekelo EPS, njl
QUANJIANG yenye abenzi abaziintloko nababonelela omnye ehlabathini yemiyinge edumileyo self-enamathelayo fiberglass njengonombombiya eTshayina, bamkelekile ukuba athenge okanye fiberglass self-enamathelayo ihoseyile wena njengonombombiya zenziwe e China kunye ukufumana isampuli simahla ukususela efektri yethu.
Self-enamathelayo fiberglass enemingxuma / Fibreglass njengonombombiya zemodeli GRC kunye EPS
ubungakanani enemingxuma: 4x4mm, 4x5mm, 5x5mm, njl
Ubunzima: 90g / m2, 110g / m2, 125g / m2, 145g / m2,152g / m2,160g / m2, njl
Ububanzi: 38inch, 1m, 1.2M, njl
ukuthamba kakhulu and self-enamathelayo fiberglass ezincangathi kakhulu Mesh:
Emva ukusebenzisa imveliso wethu, akuyi lula uPienaar okanye ukusilela ngcina ngo 72hours.
roll ngamnye engxoweni yeplastiki okanye shwabana oshushu kunye ilebhile, iphepha 2 inch ityhubhu.
Nge ibhokisi ibhokisi okanye pallet.
B.The self-enamathelayo fiberglass enemingxuma onesimilo ezilungileyo ngcina kwaye iza kugcinwa ixesha elide, ngexesha elifanayo umnatha kulula ukuba unroll, kungenxa ngcina kulu zethu ezithile kunye igqibeleleyo.
Ukusebenzisa ukuba umfuziselo enzima, umz GRC nophahla kunye nomzekelo EPS, njl
Previous: Self-enamathelayo Fibreglass mesh Tape
Okulandelayo: Flexible Metal Corner Drywall Joint Tape